Madaxweynaha Turkiga oo taageero u muujiyay Mesut Ozil - BBC News Somali
Madaxweynaha Turkiga oo taageero u muujiyay Mesut Ozil
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa difaacay Mesut Ozil oo ah ciyaartoy Jarmal ah balse asal ahaan ka soo jeeda Turkiga kaas ee dhaleecayn kala kulmay in uu sawir la galay hoggaamiyaha Turkiga.
Ozil oo 29 jir ah ayaa ciyaaraha qaranka ee kubbadda cagta ka fariisatay bishii Luulyo, isaga oo ku sababeeyay "in la midab takooray ixtiraam darrana looga muujiyay" dalka Jarmalka sawirrada uu galay awgeed.
Balse madaxweyne Erdogan ayaa yiri "Ma marjinaa ciyaartooygii Jarmal ah ee dalkeena ka ciyaara marka uu sawir la galo Hogaamiye Angela Merkel?"
Arsenal: si wanaagsan buu u socdaa wadahadalka Mesut Ozil
Madaxweynaha Turkiga oo waraysi siiyay warbaahinta Funke Mediengruppe ee dalka Jarmalka ayaa sheegay "in aysan jirin wax uu Ozil ka shalaayo".
Mesut Ozil oo khadka dhexe uga dheela Arsenal iyo Ilkay Gündogan oo Manchester City u ciyaara oo sawirro la galay madaxweynaha bishii May ayaa sheegay "in labadooduba ay gurigooda dareemaan marka laga hadlayo dalka Jarmalka ee ay dhalashadiisa haystaan iyo dalka Turkiga oo faracoodu uu ka soo jeedo".
Erdogan oo ula jeeda Ozil-na wuxuu yiri go'aanka uu ciyaaraha kubbadda ee caalamiga ah uga fariistay sabab la'aan ma ahayn. Qof kaste oo cunsuriyayntaas iyo caydaas oo kale ay soo wajahdana go'aankaas oo kale ayuu qaadan lahaa."
Siduu Ozil u sharaxay go'aanka uu ciyaaraha caalamiga ah uga fariistay?
"Markaan guul gaarno Jarmal baan ahay, balse markaan guuldarraysano soo galooti ayaan ahay," ayuu yiri Ozil.
Balse Ozil ayaa sheegay in sidii dhawaan loola dhaqmay ay ku qaaday "in uu go'aansado in uusan mar dambe xiranin funaanadda xulka Jarmalka".
"Isaga oo qoraal dheer soo dhigay baraha bulshada ayuu sheegay in uu dareemayo in uusan aqbalaad ka helin bulashada Jarmalka inkastoo uu canshuur bixiyo, kaalmeeyo waxyaabaha wanaagsan isla markaasna uu dalkiisa u soo hoyiyay Koobka Adduunka.